Christmas Cookies | Taste Window Magazine
Christmas ကို Cookies သား အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ကြပါတယ်။ အများအား ဖြင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေဖြစ်တဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှုန့်၊ ချင်းမှုန့်၊ လေးညှင်းပွင့်၊ ဖာလာစေ့၊ စမုန်စပါးစေ့၊ နာနတ်ပွင့်၊ All Spices,Five Spices တို့ကို ထည့်ပြီး လုပ်စားကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Cookies အပေါ်မှာ ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ပြီး Christmas ကို ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် မကြိုက်ရင်တော့ ရိုးရိုးSugar Cookies, Butter Cookies တွေကို တလိမ့်တုံးနဲ့ လှိမ့်ပြီး Christmas Cookies Cutter တွေနဲ့ ဖြတ်ပြီးတော့ ရောင်စုံRoyal Icing တွေနဲ့ အလှဆင်ပါတယ်။ လှိမ့်တဲ့ဒုရဲ့ အထူအပါးပေါ် မူတည်ပြီး အခုရေတွက်ပါမယ်။ ဖုတ်တဲ့အချိန်လည်း ကွာသွားပါတယ်။ ထူရင် ဖုတ်ချိန်ကြာပါတယ်။ ကဲ… ပရိသတ်ကြီးရေ… လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Christmas Cookies တွေ လုပ်စားကြရအောင်…။
ထောပတ်- ၂ဝဝ ဂရမ်
သကြားအမှုန့်- ၆၀ ဂရမ်
ကိတ်ဂျုံ- ၃ဝဝ ဂရမ်
ဗနီလာအနံ့- စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ထောပတ်၊ သကြားအမှုန့်နှင့် ဆားတို့ကို ထောပတ်ဖြူပြီး ပွလာအောင် မွှေတံဖြင့် မွှေပါ။ ဗနီလာအနံ့နှင့် ရောမွှေပါ။
၂။ ကိတ်ဂျုံကို ရော၍ မွှေပါ။ ၁ မိနစ်ခန့်မွှေပြီး မုန့်သားပျော့လျှင် အနည်းငယ် မုန့်သားကို ပြား၍ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၁၅ မိနစ်ခန့် သိမ်းထားပါ။
၃။ အနည်းငယ်မာ၍ ခဲလာလျှင် စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံဖြူး၍ Cookies ကို 0.2cm အထူအပါးခန့် လှိမ့်ပြားပြီး Christmas Cookies Cutter များဖြင့် ဖြတ်၍ မုန့်ဖုတ်ဗန်းထဲ ထည့်ပါ။ အပေါ်အောက်မီးအပူချိန် 170 ̊ C ဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဖုတ်ပါ။ အရောင်အနည်းငယ် ထည့်လျှင် ရပါပြီ။ အရောင်မရသေး လျှင် နောက်ထပ် ၃-၅ မိနစ်ခန့် ထပ်မံ၍ ဖုတ်ပါ။ ပြီးလျှင် မီးဖိုထဲမှ ထုတ်ပြီး အအေးခံပါ။
Royal Icing အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
သကြားအမှုန့်- ၁ဝဝ ဂရမ်
ကြက်ဥအကာ- စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
သံပရိုအရည်- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောမွှေပါ။ အရမ်းမာလျှင် ကြက်ဥအကာ (သို့) သံပရိုအရည် အနည်းငယ် ထည့်လို့ရပါတယ်။ ပျော့နေလျှင် သကြားအမှုန့်ကို ရောပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုချင်တဲ့ အပျစ်အကျဲရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ မိမိလိုအပ်သလို အရောင်လေးတွေ ရောထပ်ပြီး Piping Bag ထဲ ထည့်၍ အအေးခံထားသော Cookies များပေါ်မှာ မိမိနှစ်သက်သလို ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ၁ မိနစ်အတွင်းRoyal Icing ခြောက်လျှင် အရသာရှိစွာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ။ လေလုံတဲ့ဘူးထဲ ထည့်သိမ်းပြီး Christmas လ တစ်လလုံး သိမ်းထားကာ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။
Chocolate Chiffon Cake..
Lemon Chiffon Cake..
Fruits and Nuts Bar..
Pumpking Spices Pound Cake..